जेब्राक्रसमै जोखिम- समाचार - कान्तिपुर समाचार
काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र कतिपय व्यस्त सकडमा जेब्राक्रस भए/नभएको थाहा हुँदैन । कतै पेन्ट उडेको त कतै सडक भत्किएको र धुलोका कारण जेब्राक्रस पुरिएका छन् । कतै चोक छेउछाउका जेब्राक्रस निमिट्यान्नै पारिएका छन् । जेब्रामा टयाक्सी र माइक्रो रोकिराखिएका भेटिन्छन् ।
पुस २८, २०७५ शिल्पा कर्ण
काठमाडौँ — सडकमा पहिलो हक कसको ? पैदलयात्रुको । संसारभर स्वीकृत मान्यता हो यो । नेपालका सडकमा भने पैदलयात्रु डराइडराइ हिँडेका र बाटो काटिरहेका भेटिन्छन् ।
पैदलयात्रुलाई बाटो काट्नैका लागि भनेर बनाइएका जेब्राक्रसिङमा समेत सवारी साधनले ठक्कर दिने र ज्यान लिने गरेको छ। पछिल्ला केही समयका घटना हेर्दा पैदलयात्रु जेब्रामै जोखिममा देखिन्छन्।
सामाखुसी चोकमा पुस २३ सोमबार पैदलयात्रीको एउटा समूहलाई नै माइक्रोबसले ठक्कर दियो। बाटो काटिरहेकामध्ये ५५ वर्षीया सीता दाहालको मृत्यु भयो। उनको टाउकोमा चोट लागेको अल नेपाल अस्पतालका आकस्मिक कक्षका चिकित्सक अनिल सुवेदीको भनाइ छ। अन्य चारमध्ये एक जनालाई ग्रान्डी लगियो र एक जना उपचारपछि डिस्चार्ज भइन्। दुई जना अझै अस्पतालमा छन्।
सोमबार माइक्रोले हानेको समूहमा अल नेपाल अस्पतालमै ‘प्राक्टिकल’ गर्दै गरेकी १९ वर्षीया सपना राई पनि थिइन्। उनका अनुसार सडकमा एउटा बस रोकिराखिएको थियो। निकै पछाडि एउटा माइक्रो थियो। ‘हात देखाएर बाटो काटदै थियौं। पर रहेको माइक्रोले बसलाई ओभरटेक गरेर हुत्तिँदै आएर हान्यो,’ उनले भनिन्, ‘त्यसपछि के भयो मलाई याद छैन। टाउकोमा चोट लागेर बेहोस थिएँ, आफैंले प्राक्टिकल गर्ने अस्पतालमा आँखा खुल्यो।’ उनी उपचारपछि डिस्चार्ज भइसकिन्।
अर्का घाइते सुशील अधिकारीले भने, ‘हानेर लडाएपछि मेरो खुट्टामाथि नै चढाएको हो कि के गरी चलायो मलाई याद छैन।’ घाइते दुई जना ५३ वर्षीय सुशील र ५० वर्षकी सरिता अधिकारी श्रीमान्–श्रीमती हुन्। सुशीलको खुट्टामा चोट लागेकाले सुन्निएको छ। डाक्टर सुवेदीका अनुसार उनको देब्रे कुर्कुच्चामा चोट लागेको छ। नसा तन्केकाले भर्ना गरिएको छ।
सरिता भने माइक्रोले हानेर ढलेपछि पनि चालकले आफूहरू माथि नै गाडी चढाउन खाजेको बताइन्। ‘लडेपछि जीउमाथि नै चढाउन खोजेको थियो। म पछाडि सरेँ, मेरो तिघ्रामाथिबाट माइक्रो गयो,’ उनले भनिन्, ‘ड्राइभरले जानीजानी मार्नै लागेको थियो।’
चिकित्सकले सरिताको अवस्था स्थिर भए पनि खतरामुक्त भने नरहेको बताए। उनको देब्रे साँप्राको हड्डी भाँच्चिएको छ। ‘पक्षघातको डर पनि छ। तिघ्राको मासु मर्न सक्छ। अहिले जोखिममुक्त भन्न मिल्दैन,’ डा. सुवेदीले भने।
अर्की घाइते लक्ष्मी सापकोटा ग्रान्डी अस्पतालमा भेन्टिलेटरमा छिन्। कुरुवा बसेका उनका छोरा विशाल सापकोटाले भने, ‘बुधबार बिहानसम्म थोरै बोल्नुहुन्थ्यो, दिउँसोबाट बोल्न नसक्ने भएर भेन्टिलेटरमा राखिएको छ। बोल्न सक्ने बेला के भएको हो भनेर सोध्न सकेनौं।’ विशालका अनुसार लक्ष्मीको फोक्सोमा चोटका कारण श्वासप्रश्वासमा समस्या आइरहेको छ।
पूर्वगृह सचिव पद्मराज सुवेदीको जेब्राक्रसबाट बाटो काट्ने क्रममा मृत्यु भएको थियो। गत वर्ष वैशाख ११ गते अनामनगरमा बाटो काटदै गर्दा ८० वर्षीय सुवेदीलाई मोटरसाइकलले ठक्कर दिएको थियो। टाउकोमा गम्भीर चोट लागेपछि उपचार क्रममा उनको ज्यान गयो।
त्यसको करिब एक महिनापछि जेठमा जेब्राक्रसमै बसले ठक्कर दिँदा सुनसरीकी २३ वर्षीया रविना चौधरीको ज्यान गयो। सुकेधारा बस्ने र वसुन्धारास्थित एक निजी विद्यालयमा पढाउने उनलाई पढाउन गइरहेकै बेला जेब्राक्रसमा बसले ठक्कर दिएको थियो। वीरगन्ज–काठमाडौं रुटमा चल्ने रात्रिबसले ठक्कर दिएपछि उनको मृत्यु भएको हो। घटनामा ना४ख ४२६२ नम्बरको गाडीका चालक बारा निजगढका २५ वर्षीय विनय तामाङ पक्राउ परेका थिए। गाडी तीव्र गतिमा रहेको प्रहरीको भनाइ छ। महाराजगन्ज प्रहरी वृत्तले उनीमाथि सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको दफा १६१ को (२) अनुसार कारबाहीको माग गरेको थियो।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा चालकको नियतअनुसार सजाय तोकिएको छ। ऐनको दफा १६१ मा ज्यान मार्ने नियत नभए पनि दुर्घटनामा मृत्यु भएको खण्डमा १ वर्ष कैद २ हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ। यसैगरी नियतवश किचेर वा सवारी साधन ठोक्काएर ज्यान लिएको देखिएमा सवारी चालक प्रमाणपत्र लिएकाको हकमा दुई वर्षदेखि १२ वर्षसम्म कैद हुन सक्ने व्यवस्था छ।
जेब्राक्रस : छ कि छैन?
काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र कतिपय व्यस्त सकडमा जेब्राक्रस भए/नभएको थाहा हुँदैन। कतै पेन्ट उडेको त कतै सडक भत्किएको र धुलोका कारण जेब्राक्रस पुरिएका छन्। कतै चोकका छेउछाउका जेब्राक्रस निमिटयान्नै पारिएका छन्। जेब्रामा टयाक्सी र माइक्रो रोकिराखिएका भेटिन्छन्।
सामाखुसी चोकको त्यो जेब्राक्रस जहाँ माइक्रोले पैदलयात्रुको ज्यानै लियो यो पनि त्यस्तै धूमिल जेब्राक्रस थियो। महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगन्जले बाटो काटेको ठाउँमा जेब्राक्रस नभएको बताउँछ। त्यसैकारण चालकलाई त्यसअनुसार मुद्दा चलाउन नमिल्ने वृत्तको भनाइ छ। तर घाइतेहरू त्यहाँ पहिलेदेखि नै जेब्राक्रस रहेको र सडक भत्काइएका कारण धुलोले मेटिएको बताउँछन्। सबैले त्यहींबाट बाटो काट्ने गरेको स्थानीयको भनाइ छ।
सडक नजिकै रहेका एक टयाक्सी चालक र वरपरका पसलेले त्यहाँ केही महिनाअघिसम्म जेब्राक्रस भएको तर अहिले मेटिएको बताए। चोकमा एउटा मात्र रहेको जेब्राक्रसको बीचैमा ट्राफिक आइल्यान्ड छ। चोकका दुवैतिर बाटो काट्ने स्थान छैन। ‘सधैं गाडीले त्यहीँ ओराल्छ र हामीले त्यहींबाट बाटो काट्ने गरेका थियौं,’ घाइतेमध्येकी सपनाले भनिन्।
सामाखुसी चोकमै खटिएका ट्राफिक प्रहरी भने जेब्राक्रस बनाउने काम सडक विभागको भएको बताउँछन्। ‘जेब्राक्रस सडक विभागले बनाउने हो, चिह्न राख्ने हो। हामीले त पालना गराउने मात्र हो। यो बीचमा भएको पनि खिइसक्यो। हामी के गर्न सक्छौं र?’
असार दोस्रो साता सडक विभाग मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालयका तत्कालीन निर्देशक शिवहरि सापकोटाले मेटिएका सडक चिह्नबारे जिज्ञासामा भनेका थिए, ‘भर्खरै सडकहरू बनेका छन्। पिच राम्ररी सेट भइसकेपछि कम्तीमा १५ दिनपछि मात्र पेन्ट गर्न मिल्छ।’ पानी परिरहेको भएर नयाँ सडकमा पिच हुन नसकेको, भएको पिच राम्ररी सेट नभएको र सेट नभएको पिचमा चिह्न लगाउन नमिल्ने उनको तर्क थियो। त्यसबेला भर्खरै मात्र पिच भएको कोटेश्वर–माइतीघर खण्डको सर्भिस लेनमा र राजधानीका अन्य स्थानमा जेब्राक्रस नभएकोबारे उनले यसो भनेका थिए।
झन्डै ६ महिना बितिसक्दा पनि जिल्ला अदालत काठमाडौं अगाडि, आर्ट काउन्सिल अगाडि सडकको बीच भागमा जेब्राक्रस भए पनि सर्भिस लेनमा छैनन्। अर्थात् एक पैदलयात्रुका हिसाबले बुझ्दा बाटो काट्ने ठाउँ नै छैन। यो अवस्था चक्रपथ रुटमा पनि छ।
कतिपय ठाउँमा भने जेब्राक्रस नै घुम्तीमा राखिँदा दुर्घटनाको जोखिम बढेको जानकार बताउँछन्।
जाउलाखेलको नेपाल टेलिकमनजिक घुम्ती सकिनेबित्तिकै जेब्राक्रसिङ छ। घुम्तीलगत्तै जेब्राक्रस हुँदा सवारी चालकलाई गाडी रोक्न कठिन हुन्छ। चोकबाट दुवैतिरको दूरीमा हुनुपर्ने ठाउँमा जेब्राक्रसको कुनै अवशेष बाँकी छैन। टाढासम्म पनि जेब्राक्रस देखिन्न। बीच चोकैमा भने सडकको दुई छेउमा हल्का सेतो धर्सा देखिन्छन्। यस्ता ‘गायब’ हुने जेब्राक्रस ठूलै सडकमा पनि थुप्रै छन्।
कतै त मोडमै जेब्रक्रस छन्। यसले चालकलाई ब्रेक लगाउन कठिन बनाउँछ। उदाहरणका लागि सहिदगेटबाट टुँडिखेल जानेपट्टि र नजिकै भद्रकालीबाट टुँडिखेल बाटो काट्न बनाइएको जेब्राक्रस। एक त भृकुटीमण्डपबाट त्रिपुरेश्वर जाने गाडीका साथै सुन्धारा जाने गाडी सँगसँगै आइरहेका हुन्छन्। अर्कोतिर सिंहदरबार हुँदै आएको गाडी पनि सुन्धारा वा त्रिपुरेश्वर पुग्न मिसिन जान्छन्। मोडमै भएको यस्ता जेब्राक्रसमा चालकले ब्रेक लगाउन गाह्रो हुने बताउँछन्। राजधानीमा कतै फुटपाथमा बार लगाइएको स्थानमा जेब्राक्रस छन् भने कतै जेब्राक्रसकै बीचमा डिभाइडर छन्।
महाराजगन्ज वृत्तले हेर्ने क्षेत्रभित्र पछिल्लो तीन वर्षयता ४८ जनाको मृत्यु सवारी दुर्घटनामा भइसकेको छ। आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा १०, अर्को वर्ष १९ र त्यसपछिको वर्ष २०७४/७५ मा १९ जनाको ज्यान गएको छ।
सडकमा जोगिनै मुस्किल
बुधबार साँझ बाफलमा बसको ठक्करले सप्तरीका दीपेन्द्र चौधरीको मृत्यु भयो। सोल्टीमोडमा काम गर्दै आएका चौधरीलाई बाटो काट्ने क्रममा बा२ख ६३५१ नम्बरको बसले ठक्कर दिएको थियो। बस चालक फरार छन्।
प्राय: बागबजारबाट कुपन्डोल सडकमा हिँड्ने नीता चिमोरिया सधैंजसो जेब्राक्रसबाटै बाटो काटछिन्। ‘तर त्यहाँ पनि गाडीको गतिले डर लाग्छ। ५/६ जना जम्मा नभएसम्म बाटो काट्ने आँटै आउन्नँ,’ उनले भनिन्, ‘नेपाल यातायात र माइक्रो हुत्तिएर आउँछन्, डरै लाग्छ। अलिक पाको चालक भए, बाटो काट्न इसारा दिन्छन्। अरूले त जेब्राक्रससमेत नभनी ठोकुँला झैं हुत्याएर ल्याउँछन्।’
उनको भनाइमा १० प्रतिशत सवारी चाकलले मात्र जेब्राक्रसिङमा गाडी रोक्छन्। कहिले गाडी जालान् र बाटो काटुँला भनेर कुरिरहनुपर्ने उनी बताउँछिन्। छोटोछोटो समयमा छुटिरहने एउटै यातायात कम्पनीका गाडीले सडकमा प्रतिस्पर्धा गर्ने गरेको चिमोरियाले बताइन्। ‘आफ्नै कम्पनीको गाडी देख्यो भने उछिन्न जोडले कुदाउँछन्,’ उनले भनिन्।
जेब्राक्रसबाटै बाटो काटदा पनि ज्यानको जोखिम हुने पैदलयात्रुको भनाइ छ। ट्राफिक नियम मान्दामान्दै सवारी चालकले जेब्राक्रसमा पैदलयात्रुलाई प्राथमिकता नदिने गरेको उनीहरू गुनासो छ।
यस्तै अनुभव सुनाउँछिन् ११ कक्षा पढदै गरेकी अनिशा गुप्ता। गाबहाल बस्ने उनी काम विशेषले सातदोबाटो पुग्दा केही दिनअघि धन्न सुरक्षित हुन सकिन्। ‘एक हप्ता पनि भाछैन, ग्वार्कोबाट जाउलाखेल गइरहेको बसले जेब्राक्रसबाटै बाटो काटदा झन्डै हानेको। धन्न छोएर मात्र गयो,’ उनले भनिन्।
सरकारी र निजी कारले बाटो छाडे पनि सार्वजनिक सवारी साधनले जेब्राक्रसमा पैदलयात्रुलाई प्राथमिकता नदिने गरेको उनको भनाइ छ। गाडीका साथै मोटरसाइकल चालकले पनि मनपरी हाँक्ने उनी सुनाउँछिन्। यसैमा सहमति थप्छिन् नीलम राई। ‘सधैं जेब्राक्रसबाटै बाटो काट्छु। तर त्यो पनि आफ्नो हो भन्ने हुन्न,’ एमबीएस अध्ययन गर्दै गरेकी उनी भन्छिन्, ‘त्यहाँ पनि मनपरी कुदाउँछन्।’
तथ्यांकले सवारी दुर्घटनामा बढीजसो पैदलयात्रुकै ज्यान जाने गरेको देखाउँछ। महानगरीय ट्राफिक महाशाखा रामशाहपथको तथ्यांकअनुसार उपत्यकामा हुने दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेमध्ये ४० प्रतिशत पैदलयात्रु छन्।
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा १ सय ६६ जनाको दुर्घटनामा परी मृत्यु भएकोमा ६५ पैदलयात्रु थिए। अर्को वर्ष १ सय ८२ जनाले दुर्घटनामा ज्यान गुमाए, जसमा ७९ जना पैदलयात्रु थिए। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १ सय ४९ जनाको मृत्यु भयो। जसमा ३४ प्रतिशत अर्थात ५१ जना पैदल हिँडिरहेका व्यक्ति थिए।
आर्थिक वर्ष २०६८/६९ देखि २०७४/७५ को वैशाख मसान्तसम्म सवारी दुर्घटना विवरण हेर्दा मुख्य कारण चालकको लापरबाही देखिन्छ। त्यसयता वार्षिक लगभग ५ हजार दुर्घटना हुने गरेकोमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी घटनामा चालकको दोष देखिएको छ। तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा उपत्यकाभित्र ५ हजार ५ सय ३० दुर्घटना भएकोमा ५ हजार २ सय ५ मा सवारी चालकको गल्ती औंल्याइएको छ। त्यसपछिका वर्षमा उपत्यकामा ५ हजार १ सय ८० सवारी दुर्घटना भए। तिनमा ४ हजार ८ सय ८४ घटनामा चालक जिम्मेवार छन्।
कस्तो हुनुपर्छ जेब्राक्रस?
यातायात तथा ट्राफिक इन्जिनियर आशिष गजुरेलको भनाइमा सहरी क्षेत्रका सीधा सडकमा जेब्राक्रस सामान्यतया ५–६ सय मिटरको दूरीमा हुनुपर्छ। कतै जनसंख्यालाई आधार मानिन्छ। उपत्यकाको हकमा वैज्ञानिक जेब्राक्रस त परको कुरा, भएका पनि केबल ‘पेन्टिङ’ रहेको उनको टिप्पणी छ।
‘कतै मेटिइसकेको छ कतै धुलोले छोपेको छ। बाटो काट्नेले दिउँसै नदेखिने भइसकेको छ, राति झन् चालकले कसरी देख्लान्,’ उनले भने, ‘विदेशमा जेब्राक्रसमा पैदलयात्रु भए सवारी अगाडि नै बढाउँदैनन्। हाम्रोमा चालकले जेब्राक्रसको परवाह नै गर्दैनन्।’
उपत्यकामा अध्ययनपश्चात् मात्र कहाँ कति जेब्राक्रसको आवश्यक छ त्यसैअनुरूप राखिनुपर्ने उनको सुझाव छ। पुतलीसडकको उदाहरण दिँदै उनले थपे, ‘ट्राफिक बत्तीसँगै पैदलयात्रुका लागि पनि लाइटको व्यवस्था छ। जेब्राक्रस सँगै त्यस्तो लाइट भए चालकले देख्छन्।’
राजधानीका सडकमा ‘हम्प’ अर्थात् जेब्राक्रस आउनुअघि सडकमा केही स–साना संरचना हुन्छन्, जसले गाडीलाई थोरै उफार्छ र चालकलाई अगाडि जेब्राक्रस रहेको जानकारी गराउँछ। काठमाडौंमा यी दुवैमध्ये केही छैनन्। ‘सडक पेन्टिङ गरेर मात्र सुरक्षित हुने होइन, अध्ययन गरी योजना बनाएर राख्नुपर्ने हो,’ गजुरेल भन्छन्, ‘मोडबाट कम्तीमा पनि ५०–६० मिटर टाढा मात्र जेब्राक्रस हुनुपर्ने हो। यहाँ धेरै मापदण्ड नपुगेका सडक छन्।’
महानगरीय ट्राफिक महाशाखाका एसएसपी वसन्त पन्त पर्याप्त संख्यामा जेब्राक्रस भए दुर्घटना कम हुने ठान्छन्। उपत्यकामा सही संख्यामा जेब्राक्रस नभएको र भएको पनि मेटिने अवस्थामा रहेको उनको भनाइ छ। ‘जेब्राक्रसले ट्राफिक व्यवस्थापनलाई प्रत्यक्ष असर गर्छ। यहाँ साढे तीन सय हाराहारी जेब्राक्रस छन्,’ उनले थपे, ‘केही मेटिएकालाई रंग्याउनुपर्ने छ, केही स्थानमा थप्नुपर्ने पनि छ।’ आफूहरूले सडक विभागलाई जानकारी गराएको तर कहिलेसम्म बन्छ भन्नेबारे थाहा नभएको उनले बताए।
संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय प्रमुख राजेन्द्र शर्मा जेब्राक्रस धुलोले गर्दा नदेखिएको बताउँछन्। ‘जेब्राक्रसमा चिह्न लगाइएको छ, धुलोले गर्दा नदेखिएको हुन सक्छ,’ दुई हप्ताअघि आएका उनले भने, ‘कतै छुटेको रहेछ भने हामी गर्छौं।’
प्रकाशित : पुस २८, २०७५ ०७:४०
पुस २८, २०७५ टीकाप्रसाद भट्ट
रामेछाप — ‘शान्त हुनुस्,’ कक्षाकोठामा माइकबाट निर्देशन आउँछ, ‘अब योग सुरु हुँदै छ ।’ नियन्त्रण कक्षबाट शिक्षकले सीसी क्यामराले २३ वटै कक्षाकोठा नियाल्छन् । विद्यार्थी र शिक्षक जब ध्यानपूर्वक शान्त भएर बस्छन्, कन्ट्रोल कक्षबाट मधुरो संगीत पठाइन्छ ।
प्रकाशित : पुस २८, २०७५ ०७:३१